Bhizinesi Advisory Franchise Yekutengesa | Mukana weFrancise | Franchiseek
Franchiseek»Mukana weFrancise»United Kingdom»Bhizinesi Advisory Franchises
Inoratidzwa Bhizinesi Advisory Franchises
Nyowani Bhizinesi Advisory Franchises
Mumakore mashoma apfuura kwave kuri kuwedzera kuri kuda kwemabhizinesi kuti iwane rutsigiro rwavanoda. Ichi chikonzero nei bhizinesi rekupa zano bhizimusi repasi rese rave richikura nekukurumidza pamakore mazhinji. Nekuti yavo ndeye yakakura kudikanwa kwemasevhisi akadai savanamuzvinabhizinesi ebhizinesi uye nezvimwe.
Ndeipi Bhizinesi Advisory Franchise inowanikwa?
Isu tinopa dzakasiyana siyana dzakasiyana dzebhizimusi rine hukama nehukama Franchiseek. Saka kana iwe uchifunga kuti chete bhizinesi rekupa zano mikana iripo ndeyekutaurirana uri kukanganisa. Nekuti ikozvino mabhizinesi anoshandisa mapato matatu echitatu kubatsira mabhizinesi avo kubudirira uye kuwana makambani avo kwavanofanirwa kuve nemari uye kuburikidza nemazano emhando yepamusoro. Tichanyora zvino mashoma emikana yauchazoona pano kuFranchiseek:
Bhizinesi Rekuita Mikana: Mabhizimusi ekutaurirana ave achionekera muchikamu chekurima kwemakore mazhinji ikozvino sezvo paine hukuru hwevatengi kumabasa seizvi pasi rese.
Mutengo Kuderedza Mikana: Vanoderedza mutengo masevhisi akabatsira mabhizinesi kwemakore ikozvino. Nekucheka mutengo usingaite mabhizinesi ari kugadzira kana kuisa mari mune izvi zvinobatsira mabhizinesi zuva rega rega kuti asatambisa mari nekubudirira zvakawandisa.
Nei iyo Bhizinesi Rekubatsira Bhizinesi Iri Kuita
Ini zvino ndichatora huwandu hwehuwandu hwakaunganidzwa mumakore akapfuura kutenderedza nei kune kwakanyanya kudikanwa kwebhizinesi rekupa mazano mukati memabhizinesi. Mamwe eaya manhamba uye chokwadi chinogona kukushamisa iwe uye zvechokwadi kunoita kuti uzive kuti vangani vanhu vari kumhanyisa mabhizinesi avo munyika yemazuva ano.
1 muvanhu gumi muUK vanoita mabhizinesi avo.
Muna 2017 zvakafanotaurwa muna 2018 vamwe vanhu vanosvika mamirioni mazana maviri kuUK vachange vachimisikidza mabhizinesi avo.
Pave nevanhu vanopfuura mamirioni makumi maviri neshanu muUS vachimhanyisa mabhizinesi avo.
Muna 2015 iyo US yakarova chinyorwa ichiputsa mabhizinesi emamiriyoni makumi maviri nemashanu.
Mabhizinesi madiki eUS anopesana makumi masere neshanu muzana emikana yekuUS.
55% yevanhu vari kuita mabhizinesi avo muUS vaizove mukuru wavo izvi zvakaunganidzwa muongororo ichangobva kuitwa.
Apping 50% yemabhizimusi madiki akatanga muUS kukundikana mukati memwedzi gumi nemaviri yekutanga.
Yakawanikwa yekutanga chikonzero mabhizinesi achikundikana mugore rekutanga nehurombo zano.
Aya maitiro anoratidzei kune bhizinesi rekupa mazano?
Zhinji idzi huwandu hunoratidza musika wakakura webhizinesi rekupa zano kumabhizinesi madiki. Zvinoratidzawo kuti vangani vanhu vari kuvaka yavo makambani mazuva ano kubva pasi kusvika kumusoro. Zvakare kukosha kwakanyanya kwandingati kubva pakuongorora uku kweUS ndeyekuti makumi mashanu muzana emabhizinesi anoita sekutadza kubva pane zano kana rutsigiro rusina kutsarukana. Izvi zvinoratidza kuti kwakakosha sei mabhizimusi ekupa zano kumabhizinesi madiki kuti bhizinesi riwedzere kubudirira mune zvemari.